DEG-DEG: Madaxii Hore UEFA Michel Platini oo lagu xiray & sababta ka dambeysa oo la shaaciyay. – Gool FM
Pep Guardiola oo ka hadlay wararka mid ka mid ah xiddigaha Man City la xiriirinaya kooxda Barcelona
DEG-DEG: Madaxii Hore UEFA Michel Platini oo lagu xiray & sababta ka dambeysa oo la shaaciyay.
Abdirashid Mohamud June 18, 2019
(Yurub) 18 June 2019. Madaxweynahii hore xiriirka kubadda cagta qaaradda yurub Michel Platini ayaa la xiray iyadoo lagu heysto habkii uu wadanka Qatar ugu abaalmariyay martigalinta koobka Adduunka 2022, artintaan ayaana kusoo aadeysa xilli wadanka qaaradda Aasiya ku yalla uu si xoogan isugu diyaariyay martigalinta tartanka.
Halyeeyga xulka France (Michel Platini) kaas oo xilka madaxtinimada UEFA loo doortay 2007 isla markaana isaga dagay 2015 ayaa horay ganaax uga helay guddiga anshaxa ee FIFA.
Majaladda laga leeyahay faransiiska ee Mediapart ayaa qirtayin Platini la xiray saakay xilligii hore iyadoo arrintaan ay qeyb ka tahay baaritaanka lagu hayo qaabkii uu Qatar ugu wareejiyay martigalinta koobka Adduunka sanadka 2022.
Sida warbixinta lagu sheegay Platini waxaa loo kaxeeyay xafiiska la dagaalanka musuq-maasuqa ee Booliiska cadaaladda kaas oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano (OCLCIFF).
Qatar ayaa lagu abaalmariyay martigalinta tartanka koobka Adduunka 2022 bishii Diseembar 2010, balse waxaa jira muran badan oo la galiyay suuragalnimada ay ku heleen.
XOG: Man United oo tallaabo qolka labiska sii dhibaateyn karta u qaadeysa sidii ay ku celin laheyd Paul Pogba.
Tababare Maurizio Sarri oo durba dalbaday laba xiddig & xiddigaha sida hoose loola xiriirinayo marwada duqda ah.